Amaxesha amaninzi i-injini evuzayo ayinakuphepheka, ngakumbi ukuba usebenzisa ioyile engalunganga, Zininzi izinto ezingcolileyo kwioyile, ayisiyonyusi nje kuphela ukonakala kwenjini, inokubangela ukuvuza kweoyile ye-injini. Makhe sixoxe malunga nokuvuza okuthile kwigumbi levalve. Yintoni ebangela ivalve cha ...
Umahluko wokuthwala itywina kunye ne-cap yentsimbi Umsebenzi wahlukile-othwala itywina kukusebenza kwayo kokutywina kunye nobomi benkonzo bunokubaluleka okubalulekileyo. Ukuthwala ukogquma uthuli kukuthintela ukuthwala uthuli kunye nokunye ukungqubana okuchaphazela umsebenzi. Izinto ezahlukeneyo zahlukile, zithwele ukutywina r ...
Ukutywinwa kwemoto kusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo. ingahlulwahlulwa ibe ngamacandelo alandelayo ngokwamacandelo asetyenzisiweyo: itywina yeoyile yomkhombandlela, itywina ye-crankshaft yeoli, itywina yeoyile yeenjini, itywina le-valve yesitampu, itywina lempompo yamanzi, itywina lempompo yeoyile, itywina lokuhambisa ioyile, itywina leasile shaft. itywina levili, ...
itywina leoyile Izizathu zokungaphumeleli kunye neendlela zokusombulula
Itywina leoyile lelokuhambisa uphawu, kwaye ubukho be "oyile ebalulekileyo kwifilimu" yimeko eyoneleyo neyimfuneko yesitywina seoyile. Kuba ubukho beoyile yefilimu yokuthambisa iyimfuneko ukuqinisekisa ukuvalwa kokutshixana kweoyile, kunye ubukho be-lubri ...
Iitywina zeoyile kunye neekhithi zeringi o ukuthenga isikhokelo
Xa ufuna ukufumana amatywina anokuthenjwa kunye neeringi ze-O eTshayina Zininzi izinto zokutywina, mhlawumbi uya kudideka, kuba ziindawo ezahlukeneyo, kunye nexabiso elahlukileyo..Kuza kubakho umgangatho owahlukileyo wamatywina ahlukeneyo. Ungalufumana njani itywina leoyile ethembekileyo kunye neringi o? 1- Itywina oyile factoryne ...
Umgaqo wokutywina ngamanzi
Itywina leHydraulic yeoyile ngokubanzi yenziwe ngezinto zokutywina zerabha. Isangqa setywina sinesakhiwo esilula, ukusebenza ngokutywina okuhle kunye nokukhuhlana okuphantsi. Ingasetyenziselwa ukuphindaphinda kwakhona kunye nokuhamba ngokujikeleza, kodwa isetyenziselwa ukulungisa amatywina, anje ngokutywina phakathi kwemibhobho, iintloko zesilinda kunye ...
Iindidi zempompo ye-oyile yokumpompa amandla
Impompo yokuhambisa itywina leoyile yamandla: 1- ukujikeleza kwebhola yokuhamba kwamandla kwibhola yeoyile: itywina leoyile yegalelo kunye netywina leoyile. I-2- i-rack yokuhambisa itywina yeoyile ye-oyile: igalelo le-shaft ye-shaft, itywina le-pinion shaft ye-shaft, i-rack yenethiwekhi ngaphakathi nangaphandle. 3- oyile itywina lokuqhuba isilinda hydraulic. Ulwandle lweoyile ezine ...
Ukuboniswa kweempawu zemagnetic kunye neempawu
Itywina leoyile Magnetic yimveliso eyilwe emva kweminyaka yophando kunye nolingo. Isebenzisa ngobuchule inkqubo yembuyekezo yemagnethi kunye netekhnoloji entsha yokutywina, kunye nofakelo olulula lunokusombulula iingxaki ekunzima ukuziphelisa kwimbali yezorhwebo. Ayiphenduli kuphela ...
Iindidi zeringi yerabha
Isangqa esimile u-U, esidla ngokusetyenziswa ekwenziweni kweenkqubo ze-hydraulic kwisitywina sokubuyisa. Ukusetyenziswa ngokubanzi kwimishini yokwakha i-hydraulic cylinder seal. I-O-ring isetyenziselwa ukutywina okunganyangekiyo kunye nokuphindaphinda ukutywinwa. Xa isetyenziselwa itywina leRotary Movement, inqunyelwe kwisantya esisezantsi sokujikeleza kwetywina ...
Isisombululo ekuVuzeni kweoyile kweGiya yeBhokisi yeTrama yeTywina?
Ukudluliselwa koomatshini yeyona nto ixhaphakileyo kubunjineli boomatshini. Isetyenziswa ngokubanzi ukuhambisa ukuhanjiswa kwamandla kunye nokukhuhlana ikakhulu ngamandla okuxubana kwamalungu omatshini, kubandakanya ukuhambisa ibhanti, ukuhambisa intambo kunye nokuhambisa ivili lokukhuhlana. Ukuhlelwa kwemveliso esisiseko: reducer, br ...
Iingcebiso ezili-9 zokukhetha amatywina erabha?
Zeziphi izinto ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha izinto ezifanelekileyo zokutywina ukuze ufake isicelo? Ixabiso elikhethekileyo kunye nokuFumaneka koMbala ngokuFumanekayo kwamatywina Zonke izinto ezinefuthe kwinkqubo yokutywina: umzekelo, ubushushu, ulwelo noxinzelelo Zonke ezi zinto zibalulekile ...
Ukuveliswa kwetywina lobuchwephesha beemveliso zobuchwephesha be-yiwu inkampani enkulu yemveliso yerabha yamatywina asebenza kulwelo oluphakathi ngokubanzi luxhomekeke kwifilimu engamanzi eyenziwe ngulwelo oluphakathi kwendawo yokuxubana yokuhamba kunye nokumisa imisesane yokuthambisa. Ke ngoko, kufuneka kugcinwe ...